Maxim Hodak bụ onye ọka iwu Dutch na iwu | Law & More B.V.
Maxim Hodak bụ onye ọka iwu Dutch nwere nnukwu ahụmịhe zuru ụwa ọnụ (n'ụlọ) nke nwere elekwasị anya na ijere ndị ahịa si ahịa Eurasia na Netherlands aka na iwu ụlọ ọrụ Dutch, iwu azụmaahịa Dutch, iwu azụmahịa mba ụwa, ụlọ ọrụ ego na njikọ na nnweta, ịtọlite ​​na njikwa nke ọrụ mba dị mgbagwoju anya na usoro ụtụ / ego. Maxim Hodak na-ekwurịta okwu na Dutch, German, French, English, Russian and Ukrainian.Maxim Hodak lekwasịrị anya na ndị ahịa si Eurasia dị ka nzaghachi maka mkpa na-arịwanye elu nke ndị ahịa a ịnata ndụmọdụ gbasara iwu na nkwado miri emi na ntọala ntọala ọrụ na Maxim Hodak bidoro ọrụ iwu ya na Clifford Chance Brussels n'afọ 2002. O mechara rụọ ọrụ dịka onye ndụmọdụ gbasara iwu na ING Bank na Netherlands. Na 2005, a rịọrọ ya ka ọ sonye na channelụ TV mba ụwa dịka onye ndụmọdụ izugbe na onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ na-ejide ihe iji kwado ụlọ ọrụ na mba ụwa na mgbasawanye na Netherlands. Malite na 2009 Maxim Hodak gara n'ihu na-enye ndị ahịa Eurasia dị iche iche na Netherlands ọrụ iwu na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ na iwu nkwekọrịta, ụtụ mba ụwa, ịhazi ihe na ego oru ngo. gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nke Investment Finance (EHSAL Management School, Brussels). Maxim Hodak na-etinyekwa uche na ịga n'ihu na agụmakwụkwọ Dutch na ụtụ isi.
Maxim Hodak bụụrụ onye ọka iwu Dutch na nnukwu iwu mba (n'ime ụlọ) nwere ahụmịhe iwu na mgbado anya na ijere ndị ahịa si ahịa Eurasian na Netherlands ozi na iwu ụlọ ọrụ Dutch, iwu azụmaahịa Dutch, iwu azụmaahịa mba ụwa, ego ụlọ ọrụ yana jikọtara ọnụ na nnweta, ịtọlite ​​na ijikwa oru ngo nke mgbagwoju mba na usoro ụtụ isi / ego. Maxim Hodak na-ekwu okwu n'asụsụ Dutch, German, French, English, Russian na Ukrainian.
Maxim Hodak elebara anya na ndị ahịa si Eurasia dị ka nzaghachi maka mkpa ndị ahịa dị otú ahụ na-arịwanye elu na-enweta ndụmọdụ iwu na nkwado siri ike na ntọala nke ịtọlite ​​ọrụ na ịhazi akụ na ọrụ n'ime yana site na ikike Dutch.
Maxim Hodak malitere ọrụ ọrụ iwu ya na Clifford Chance Brussels na 2002. Nke na-esote ọ rụrụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ iwu na ING Bank na Netherlands. Na 2005, a rịọrọ ya ka ọ sonye na ọwa TV nke mba dị ka onye ndụmọdụ n'ozuzu ya na onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ na-ejide aka iji kwado otu mmepe ya na mgbasawanye nke mba Netherlands na Netherlands. Malite na 2009 Maxim Hodak gara n'ihu na-enye ndị ahịa Eurasia dị iche iche ọrụ na Netherlands na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ na nkwekọrịta, ụtụ mba ụwa, na-ahazi akụ na njikwa oru ngo.
Maxim Hodak nwere akara ugo mmụta Master na Law (Mahadum Amsterdam) na Post-gụsịrị akwụkwọ na ogo agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ na mpaghara nke Investment Finance (EHSAL Management School, Brussels). Maxim Hodak na-etinyekwu uche na agụmakwụkwọ iwu Dutch na ụtụ isi.